Fanambarana Apple tao amin'ny Kaongresy amerikana manohitra ny baiko FBI | Avy amin'ny mac aho
Fanambarana Apple tao amin'ny Kongresy amerikana manohitra ny baiko FBI
Applelised | | About us
Androany hisolo tena ny Komitin'ny Fitsarana An-trano ny mpanolo-tsaina jeneraly Apple Bruce Sewell. Hodinihina manodidina ny didim-pitsarana izay manery an'i Apple hamorona kinova iOS miaraka amina "varavarana ambadika" izay ahafahan'ny FBI miditra amin'ny iPhone an'ny voalaza fa mpampihorohoro Farook. Hiseho eo imason'ny vahoaka misalasala i Sewell, ao anatin'izany i Cyrus Vance, mpisolovava ao amin'ny distrikan'i Manhattan ary solontena maromaro ao amin'ny kaongresy izay mpiaro mafy ny toeran'ny FBI taloha. Ity ny kabary fanokafana feno izay holazain'i Sewell ary izay navoakan'i The Verge.
«Misaotra, Andriamatoa Filoha. Faly aho fa tonga eo amin'ny Komity anio amin'ny anaran'ny Apple. Ankasitrahanay ny fanasana nataonao sy ny fotoana mety ho anisan'ny fifanakalozan-kevitra amin'ity olana lehibe ity izay mifantoka amin'ny fahalalahana sivily izay fototry ny firenentsika.
Te-hamerina zavatra efa nolazainay hatramin'ny voalohany aho - fa ireo traboina sy fianakavian'ilay fanafihana tao San Bernardino dia manana fiaraha-miory fatratra ary manaiky tanteraka izahay fa tsy maintsy atao ny fahamarinana. Apple dia tsy miara-miory amin'ireo mpampihorohoro.
Manaja indrindra ny mpampihatra lalàna izahay ary mizara ny tanjony amin'ny famoronana tontolo azo antoka. Manana ekipa matihanina manolo-tena amin'ny antso 24 ora isan'andro, fito andro isan-kerinandro, 365 andro isan-taona izahay hanampy ny mpampihatra lalàna. Rehefa tonga tany aminay ny FBI taorian'ny fanafihana San Bernardino avy hatrany dia nomenay ny fampahalalana rehetra nampifandraisinay tamin'ny fanadihadian'izy ireo. Ary nanao ny kilaometatra fanampiny izahay tamin'ny fametrahana ireo injeniera Apple hanoro hevitra momba ny safidy fikarohana fanampiny.
Saingy izao dia hitantsika fa eo afovoan'ny toe-javatra miavaka iray isika. Nangataka fitsarana ny FBI mba hanome azy ireo zavatra tsy ananantsika. Mamorona rafitra miasa izay tsy misy, satria mety hampidi-doza loatra izany. Mangataka varavarana ambadika ao amin'ny iPhone izy ireo, manokana hananganana fitaovana rindrambaiko iray izay afaka manaparitaka ny rafitra encryption izay miaro ny mombamomba anao amin'ny iPhones rehetra.
Araka ny efa nolazainay taminao, ary araka ny efa nolazainay tamin'ny vahoaka amerikana, ny fananganana io fitaovana rindrambaiko io dia tsy hisy fiantraikany amin'ny iPhone fotsiny. Hanimba ny filaminan'izy rehetra izany. Raha ny marina, ny herinandro lasa teo dia nanaiky ny talen'ny Comey fa ny FBI dia mety hampiasa an'io ohatra io amin'ny tranga hafa misy finday hafa. Nilaza koa ny mpampanoa lalàna Vance fa mikasa ny hampiasa izany amin'ny finday mihoatra ny 175 izy. Manaiky isika rehetra fa tsy momba ny fidirana amin'ny iPhone tokana izany.
Ny FBI dia mangataka amin'i Apple hanalemy ny fiarovana ny vokatra vokarinay. Ireo mpijirika sy mpanao heloka bevava amin'ny cyber dia afaka mampiasa izany mba hanimba ny fiainantsika manokana sy ny fiarovana antsika manokana. Hametraka ohatra iray mampidi-doza amin'ny fidiran'ny governemanta amin'ny tsiambaratelo sy fiarovana ny olom-pireneny.
Olona an-jatony tapitrisa mpankato lalàna no matoky ny vokatra Apple amin'ny antsipiriany akaiky indrindra amin'ny fiainany isan'andro - sary, resaka manokana, angon-drakitra momba ny fahasalamana, kaonty ara-bola, ary ny mombamomba ny toerana misy ny mpampiasa, ary koa ny toerana misy ny namanao sy ny fianakavianao. Ny sasany aminareo dia mety manana iPhone ao am-paosinao dieny izao, ary raha mieritreritra momba izany ianao dia mety misy fampahalalana bebe kokoa voatahiry ao amin'ilay iPhone voalaza toy izay angalaran'ny mpangalatra amin'ny fidirana an-tranonao. Ny hany fomba ahafantarantsika miaro ny angona dia amin'ny alàlan'ny enkripsi mahery.
Isan'andro, fifanakalozana mihoatra ny tapitrisa tapitrisa no azo antoka amin'ny Internet vokatry ny serasera nafenina. Ireo dia manomboka amin'ny fifanakalozana banky sy carte de crédit an-tserasera ka hatramin'ny fifanakalozana firaketana ara-pahasalamana, hevitra izay hanova an'izao tontolo izao ho tsara kokoa, ary ny fifandraisana eo amin'ny olon-tiana. Ny governemanta amerikana dia nandany dolara an-tapitrisany tamin'ny alàlan'ny Open Technology Fund sy programa hafa mba hamatsiana crypto mahery. Ny Vondron-kevitra momba ny fifandraisan-davitra sy teknolojia momba ny serasera, nantsoin'ny filoham-pirenena Obama, dia nanentana ny governemanta amerikana mba hanohana tanteraka fa tsy hanakorontana, hanimba, hanalemy na hametraka rindrambaiko mora azo.
Encryption dia zavatra tsara, zavatra ilaina. Nampiasainay tamin'ny vokatray nandritra ny folo taona mahery. Rehefa miha mandroso ny fanafihana ny angon-drakitry ny mpanjifanay dia tsy maintsy mihamatanjaka ihany koa ireo fitaovana ampiasaintsika hiarovana azy ireo. Manimba ny mpanjifa sy ny mpampiasa tsara hafa miantehitra amin'ny orinasa toa an'i Apple ny fiarovana ny valiny malemy raha tsy hiaro ny mombamomba azy ireo manokana.
Ny fandrenesana anio dia mitondra ny lohateny hoe Ny fandanjana ny filaminana sy ny fiainana manokana ho an'ny Amerikanina. Mino isika fa afaka, ary tokony hanana roa. Miaro ny fiainantsika manokana sy miaro ny olona ny fiarovana antsika amin'ny fiarovana ny angon-tsaintsika amin'ny fomba enkripsi sy fomba hafa.
Mendrika resaka marina momba ny olana lehibe nipoitra tamin'ny fanenjehana FBI ny vahoaka amerikana:
Tianay ve ny hametra ny teknolojia miaro ny angon-drakitra, ka noho izany ny fiainantsika manokana sy ny fiarovana antsika, na eo aza ny zava-misy fa manahirana ny fanafihana cyber? Tokony avela hanakana an'i Apple, na orinasa hafa ve ny FBI, amin'ny fanolorana ny vahoaka amerikana ny vokatra azo antoka indrindra azo atao?
Amin'ity tranga ity, manana fahefana ve ny FBI hanery ny orinasa hamokatra vokatra izay mbola tsy nataon'izy ireo, araka ny antsipiriany mazava momba ny FBI sy ny fampiasana ny FBI?
Mino izahay fa ny tsirairay amin'ireto olana ireto dia mendrika dinika ara-pahasalamana, ary ny fanapahan-kevitra rehetra dia tsy maintsy raisina aorian'ny fandinihana tsara ny zava-misy.
Ny tena zava-dehibe dia tsy maintsy ataonao sy ny mpiara-miasa aminao ny fanapahan-kevitra fa tsy ny alàlan'ny fangatahana didim-pitsarana mifototra amin'ny lalàna iray 220 taona.
Ao amin'ny Apple, vonona izahay hanao an'ity resaka ity. Ny hevitra sy ny fanohanana henontsika dia milaza amintsika fa vonona ny vahoaka amerikana koa.
Mino tanteraka izahay fa ny mpanjifanay, ny fianakaviany, ny namany ary ny mpifanolobodirindrina aminy dia ho voaro kokoa amin'ny mpangalatra sy mpampihorohoro raha afaka manome fiarovana tsara indrindra ho an'ny angon-drakitra arak'izy ireo izahay. Ary amin'ny fotoana iray ihany, ny fahalalahana sy ny fahalalahana izay sarobidy amintsika rehetra dia ho azo antoka kokoa.
Misaotra ny fotoananao. Manantena ny hamaly ireo fanontanianao aho".
Azonao atao ny manaraka ny fandrakofana feno momba an'ity raharaha ity izay ataontsika eto amin'ny Applelizados eto.
SOURCE | The saika
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » About us » Fanambarana Apple tao amin'ny Kongresy amerikana manohitra ny baiko FBI
Apple dia mamoaka ny OS X 5 Beta 10.11.4 ho an'ny Developers
Ity no filohan'i Samsung miaraka amin'ireo sainam-pirenena hijoro amin'ny Apple Store